မန္တလေးမြို့ ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်း ပလက်ဖောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ သင်္ကြန်အမီ ပြီးစီးအောင? - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့ ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်း ပလက်ဖောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ သင်္ကြန်အမီ ပြီးစီးအောင?
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အောင်မြေသာစံမြို့ နယ် ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်း ၆၆ လမ်း၊ ၁၂ လမ်းမှ ၂၆ လမ်းအထိ ပလက် ဖောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုသင်္ကြန်ကာလအမီပြီးစီးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကျုံးအရှေ့ဘက် ပလက်ဖောင်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဧဒင် ကုမ္ပဏီအုပ်စု ပိုင်ရှင်ဦးချစ်ခိုင် က လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းများ ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်က စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
”လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာ က ဧဒင်ကုမ္ပဏီကပါ။ သင်္ကြန်ကာ လပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီကလည်း လူအင် အားတွေထပ်ဖြည့်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့စည်ပင် အနေနဲ့လည်း လိုအပ်တဲ့အရာ တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်”ဟု မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်ဦးကျော်ဆန်း မြင့်က ပြောကြားသည်။ ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ပြုလုပ်နေသည့် ပလက်ဖောင်းကို မသန်စွမ်းသူများသွားလာနိုင်ရေးအပါအဝင် အများပြည်သူအပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရန် ထိုင်ခုံများ၊ အလှသစ်ပင်များ ထည့်သွင်းသွား မည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဗိသုကာ ပညာရှင်က ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးထား ခြင်းဖြစ်ကာ စတီးကြိုးအကာအရံ ပါဝင်သည့်ဒီဇိုင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျုံးတောင်ဘက်နှင့် အ နောက်ဘက်ပလက်ဖောင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကျုံးတောင် ဘက်လက်ရန်းတပ်ခြင်းလုပ်ငန်း များကို မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီက ငွေကျပ်သိန်း ၄ဝဝဝ အကုန်အကျခံ၍ လုပ် ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်က ၎င်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာတွင်ရေးသားဖော်ပြထားချက်မှာ”၆၆ လမ်းပလက် ဖောင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၁၂ လမ်းနဲ့ ၁၆ လမ်းကြားနေ ရာကို ပြည်သူတွေ နေဝင်ဆည်း ဆာကိုထိုင်ပြီး ကြည့်ရှုအပန်းဖြေ နိုင်မယ့်နေရာလေးအဖြစ် ဖန်တီး ထားတယ်။ လူသွားလမ်းပိုကျယ် ကျယ်နိုင်ဖို့ flower box ကို square shape လုပ်ဖို့အကြံပေးထားတယ်။သင်္ကြန်အမီပြီးဖို့အရေးကြီးတာ ကြောင့် ထပ်တိုးမယ့်ဝန်ထမ်းတွေ ယာယီနေထိုင်ဖို့နီးနီးနားနားမှာရှိတဲ့စည်ပင်ပိုင်မြေကွက်ကို ခေတ္တ နေထိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်”ဟု ရေး သားဖော်ပြထားကြောင်း သိရ သည်။
ချင်းတွင်းမြစ် ရေကြောင်းကျပ်သည့်ကာလသို့ ရောက်လာသောကြောင့် အမြန်ရေယာဉ်များပြေးဆွဲချိန်ေ??
ရခိုင်ရိုးမတွင် တရားမဝင် သစ်တန်ချိန် ၆ဝ နှင့် သစ်စက်နှစ်လုံးဖမ်းမိ
မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်ကိုင်ခွင့် စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် အမျိုးသားကြီးပွား တိုးတက်ေ?
ဦးဝီရသူအား အရေးယူပေးရန် နှိုးဆော်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပျက်ပြီးနောက် မြန်မာဂျာနယ်လစ် ?
ရန်ကုန်အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ကိုးခုတွင် ဧပြီလအတွင်း ပုံမှန်အပူချိန်၏ ၁ ဒသမ ၅ ဒ?
မြောက်ကိုရီးယား ပိတ်ဆို့မှု ချိုးဖောက်ခြင်းကို ရုရှား ဖုံးကွယ်ထားသည်ဟု အမေရိကန် စွပ်စွဲ